राष्ट्रकवि घिमिरेकाे अभिनन्दनमा भद्रगाेल : ब्यानरमै ‘शतवार्षिकी’, अभिनन्दनपत्र कसले लेख्याे ? « News24 : Premium News Channel
राष्ट्रकवि घिमिरेकाे अभिनन्दनमा भद्रगाेल : ब्यानरमै ‘शतवार्षिकी’, अभिनन्दनपत्र कसले लेख्याे ?
काठमाडाैँ । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलार्इ काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्याे । शनिबार महानगरबासीको तर्फबाट भन्दै राष्ट्रकवि घिमिरेलाई रथयात्राका साथै नागरिक अभिनन्दन गरिएकाे हाे ।
राष्ट्रकवि घिमिरे सय वर्ष पुगेकाे अवसरमा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्नुभयाे । अभिनन्दन पत्र पनि कवितात्मक भाषामा लेखिएकाे थियाे । राष्ट्रकवि घिमिरेकाे सम्मानमा अर्का कवि भुवनहरि सिग्देलले साे अभिनन्दन पत्र लेख्नुभएकाे हाे । तर अभिनन्दन पत्र कसले लेख्याे भन्नेबारे नखुलाइएकाे र अन्य अनावश्यक व्यक्तिलार्इ समेत ताम्रपत्र प्रदान गर्दा अाफूलार्इ अायाेजक र सह-अायाेजक कसैले नसम्झेकाेमा कवि सिग्देलकाे गुनासाे छ ।
अभिनन्दन समाराेहमा भद्रगाेल देखिएकाे भन्दै उपस्थित कविहरुबीचमै तर्कवितर्क चलेकाे थियाे । कतिपय कविहरु राष्ट्रकविजस्ताे विशिष्ट व्यक्तिकाे सम्मानमा देखिएकाे यस्ताे भद्रगाेल सहन नसकेर बीचमै उठेर हिँडेका थिए ।
समाराेहका सह-आयोजक रहेकाे दाबी गर्ने देवेन्द्र रिमालसँग कवि बलराम दाहालकाे चर्काचर्की नै पर्याे । समाराेहमा ब्यानरमै ‘शतवार्षिकी’ लेखिएकाे प्रति समेत कवि-लेखकहरुकाे अापत्ति रह्याे । सामान्यतया जीवित व्यक्तिकाे जन्माेत्सवमा वार्षिकी शब्द लेखिँदैन, याे शब्द मृतकप्रति लेखिने भाषाका जानकारहरु बताउँछन् । समाराेहकाे यस्ताे हर्कत देखेर कवि-लेखकहरु रुष्ट भएका थिए ।
लेखक तथा सम्पादक व्याकुल पाठकले ट्विटरमा लेख्नुभएकाे छ, ‘सतवार्षिकी शब्दले मनमा कस्तो चसक्क भयो ! यो शब्दको अर्थोन्नति भएको हो र ?’
कामनपाले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको एक सयौं शुभजन्मोत्सव रथयात्रा सहित भव्य रूपले मनाएछ । खुसी लाग्यो ।
ब्यानरमा उल्लेख भएको ‘सतवार्षिकी’ शब्दले मनमा कस्तो चसक्क भयो ! यो शब्दको अर्थोन्नति भएको हो र ? यसो जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो ।
Photo: Gyanendra Bibas को फेसबुक pic.twitter.com/QfFCi5rZoj
— Byakul Pathak (@byakulpathak) September 29, 2018
कवि एवं लेखक भुवनहरि सिग्देलले अाफूलार्इ कार्यक्रममा बेवास्ता गरेकाे प्रति चित्त दुखाउनुभएकाे छ । ‘राष्ट्रकवि घिमिरेलाई दिइने अभिनन्दनपत्र पद्यमा लेख्नुपर्यो भनेकोले मैले तयार गरेको थिएँ, त्यसको वाचन गर्न पनि मलाई नै लगाइयो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘बीचतिर भाषा, भाव नमिलेको एउटा कविता एकजनालाई वाचन गर्न लगाइयो, यो राष्ट्रकविकै बेइज्जत हो भन्दै केही वरिष्ठ कविहरु बीचमै उठेर हिँडे ।’
कवि सिग्देलले अाफ्नाे फेसबुकमा लेख्नुभएकाे छ, ‘समाराेहमा कलाकारहरुले नाचे गाए, ठिकै हो । अन्तमा त गजबको तमासा भयो- नर्तकी र कलाकरहरुले नगद र ताम्रपत्रसमेत पाए । त्यही सम्मान कार्यक्रम सञ्चालकलाई पनि दिइयो । तर अभिनन्दन लेख्ने कविलाई ती सम्मान त परै रहोस्, धन्यवाद शब्द पनि कसैले दिएन ।’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘यता म अप्ठेराेमा परेकाे छु, कतिपयले त मलाई त्यो कविता बेचेको हो र ? भनेर समेत प्रश्न गरे ।’
यसबारे कवि सिग्देलसँग थप बुझ्न खाेज्दा उहाँले प्रष्ट पार्नुभयाे, ‘यहाँ मैले व्यक्तिगत कुण्ठा पाेखेकाे हाेइन, यस्ता सभा समाराेहमा देखिने विकृति एवं लापरवाही काेट्याउन खाेजेकाे हुँ । राष्ट्रकविलाई दिइएको ताम्रपत्रमा लेखिएकाे पद्य कविताकाे लेखक काेहाे भनी भोलि खाेजी हुन सक्छ, जसले पनि मेरो हो भनेर दाबी गर्न सक्छ । किनकि त्याे पद्य तयार पार्ने लेखककाे नाम नै कहीँकतै उल्लेख छैन ।’
अभिनन्दन समाराेहमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, कलाकार राजेश हमाललगायत व्यक्ति उपस्थित थिए । हमाललार्इ समाराेहकाे सभापति बनाइएकाे थियाे, यसकाे अन्तर्य समेत धेरैले बुझ्न सकेनन् । अभिनन्दनअघि राष्ट्रकवि घिमिरेकै रचना ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे..’ गुन्जाउँदै उहाँलाई निवासदेखि राष्ट्रिय सभागृहस्थलसम्म लावा लस्कर, बाजा गाजा र झाँकीसहित घोडा बग्गीमा राखेर रथारोहणसहित नगर परिक्रमा गराइएको थियो ।
मोदीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने देउवाको दाउ, ४ वर्षपछि मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै